ဖင်လန်အွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များ - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
(753 ပျမ်းမျှအားမဲ: 4.00 )5ထဲက
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနဲ့တခြားနိုင်ငံများနှင့်မတူဘဲဖင်လန်အတွက်လောင်းကစားဝိုင်းများ၏စီမံခန့်ခွဲမှုတစ်ပြည်နယ်လက်ဝါးကြီးအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံလူမှုရေးလိုအပ်ချက်များနှင့်ပရဟိတအဘို့အသွား, ထီ, slot ကစက်တွေနဲ့ကာစီနိုလောင်းကစားရုံထံမှရရှိခဲ့သည်။
ဂရန်းကာစီနိုဟယ်လ်စင်ကီ (ဂရန်းကာစီနိုဟယ်လ်စင်ကီ) - ယနေ့အဘို့အဖင်လန်အတွက်တစ်ဦးတည်းသာအစစ်အမှန်လောင်းကစားရုံလည်းမရှိ။ ဤသည်လောင်းကစားဝိုင်းတည်ထောင်ခြင်း Mikonkatu လမ်းပေါ်တွင်, ဖင်လန်မြို့တော်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာတည်ရှိပါတယ်။ သငျသညျသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနီးပါးမည်သည့်အမျိုးအစားအားဖြင့်ရှိရနိုင်သည်။
ဂရန်းကာစီနိုဟယ်လ်စင်ကီပြန်အစောပိုင်း 20th ရာစုမှချိန်းတွေ့အသစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်အဆောက်အဦးတွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်း၏စုစုပေါင်းဧရိယာ 2500 m2 ဖြစ်ပါတယ်။ သုံးရာ slot ကစက်တွေအခြားဂိမ်းတစ်ခုဖဲချပ်ဝေကလပ်နှင့် 20 စားပွဲ (ကစားတဲ့, အနက်ရောင်ဂျက်တက္ကဆက်ပြည်နယ် Hold'em, Punto Banco), သုံးဘားနှစ်ခုစားသောက်ဆိုင်ထက်ပိုဤသည်အာကာသကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်။
ထိပ်တန်း 10 ဖင်လန်အွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
အဆိုပါလောင်းကစားရုံ 12 မှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်း၎င်း၏တံခါးများဖွင့်လှစ်: 00 ။ 13: သို့သော်လည်းကဒ်စားပွဲ 30 မှာသာလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစတင် "အသကျရှငျ" ။ ဤအချိန်တိုင်အောင်, ကစားသမားများသာရရှိနိုင်ပါတသန်ဒမြ, အီလက်ထရောနစ်ဖဲချပ်စားပွဲနှင့်ကစားတဲ့ TouchBet ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါဝင်ပေါက်ကိုတရားဝင်အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ဗီရိုန်ဆောင်မှုကိုသင်€2ကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။ စကားမစပ်အဆိုပါလောင်းကစားရုံများတွင်နိမ့်ဆုံးလောင်းကြေးအတိအကျပမာဏအတူတူဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးလောင်းကစားရုံများတွင် 18 နှစ်အောက်ကလူထင်ကြသည်မဟုတ်, ကိုလည်းရဲဘော်တွေကအားကစားဝတ်စုံဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ဗီရိုမှပြင်အဝတ်အစားလွှဲပြောင်းပေးအပ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာရန်းကာစီနိုဟယ်လ်စင်ကီမှာမကျြနှာကိုထိန်းချုပ်သည့်ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်ပတ်သက်ပြီးအလွန်သစ္စာရှိပြီးအေးဆေးတည်ငြိမ်ကြောင်းသတိပြုသင့်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူ crumpled နှင့် unshaven သူတွေကိုလက်လွတ်မထားဘူး။
အခုတော့ပိုက်ဆံအကြောင်းကိုအနည်းငယ်စကားများ။ ဂရန်းကာစီနိုဟယ်လ်စင်ကီမှာတော့အားလုံးတွက်ချက်မှုသာယူရိုအတွက်ကောက်ယူနေကြသည်။ ဘားနှင့်စားသောက်ဆိုင်ငွေပေးချေမှုများအတွက်နှစ်ဦးစလုံးကတ်များနှင့်ငွေသားကိုလက်ခံပေမယ့်လောင်းကစားရုံအတွက်ချစ်ပ်သာဥရောပရူဘယ်လက်ငင်းငွေချေဖို့အတွက်ပြောင်းလဲနေကြသည်။ သို့သော်ဤသူသည်သင်တို့ငွေစက္ကူတွေအပြည့်အဝအိတ်ကပ်နဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုသွားရန်ရှိသည်လိမ့်မည်ဟုမဆိုလိုပါ။ သင်အလွယ်တကူပလတ်စတစ်ကဒ်အတူပါလာများနှင့်ဧည့်ခံစားပွဲဘေးတွင်တည်ရှိပြီးသောဒေသခံ ATM စက်များမှာကနေငွေသား၏လိုအပ်သောငွေပမာဏကိုထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, ဂရန်းဟယ်လ်စင်ကီကာစီနိုရုံလောင်းကစားခန်းမမဟုတ်ပါဘူး။ အရက်ဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များတွင်၌သင်တို့ကို, ကောင်းစွာအစာစားအားကစားပြိုင်ပွဲများ၏ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ဂီတအသက်ရှင်ရန်နားထောင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် Fennia အလှပြင်ဆိုင်စားသောက်ဆိုင်မှန်မှန်အမျိုးမျိုးသောကျော်ကြားမှုနှင့်လူကြိုက်များမှု၏အသင်းများတက်ရောက်လျက်ရှိသောပြပွဲအစီအစဉ်များ, အိမ်ရှင်အဖြစ်။ "ပြပွဲ + ညစာစားပွဲ" အတှကျလက်မှတ်စျေးနှုန်း 50 ထံမှ 100 €ဖို့နေကြပါတယ်။
ကာစီနိုများနှင့်ကူးတို့ကြီးများမြို့တော်လောင်းကစားရုံအပြင်, ဖင်လန်နိုင်ငံအများအပြားထက်ပိုသေးငယ်တဲ့ဂိမ်းခန်းမ "Potti" ရှိပါတယ်နှင့်ကလပ်ကလပ် "ကလပ် Ray" ၏ကွန်ယက်။ ပထမဦးဆုံးခုနှစ်တွင်မရှိအစစ်အမှန်ကဒ်စားပွဲဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထိုနှုန်းထားများ 20 €ထက်မပိုနိုင်ပါ။ ဒုတ် "Potti" စည်းကမ်းအဖြစ်, စျေးဝယ်စင်တာများမှာတည်ရှိပါတယ်နှင့်အတူတူပင်အလုပ်အချိန်ဇယားများနေကြသည်။ "ကလပ် Ray" မှာနှုန်းထားများအပေါ်ကန့်သတ်ရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့စက်တွေရှိသည်, ဒါပေမယ့်လည်းကဒ်စားပွဲ "အသကျရှငျ" မရှိဘူးမသာ။ ဤကွန်ယက်၏အကြီးဆုံးကလပ်အသင်းJyväskylä (Kauppakatu 41) နှင့်ဖြစ်တဲ့တူရ်ကူမြို့မှာ (Eerikinkatu 10) တွင်တည်ရှိသည်။
ဒါ့အပြင်တရားဝင်ဖင်လန်အတော်ကြာ "မျောကာစီနိုလောင်းကစားရုံ" ပိုင်ဆိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားကစားတဲ့, ဖဲချပ်များနှင့် Blackjack ကစားဘို့စားပွဲတပ်ဆင်ထားသေးငယ်တဲ့ကူးတို့ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ဟာရုရှား၌ကာစီနိုလောင်းကစားရုံအပေါ်ပိတ်ပင်ထားမှုပြီးနောက်ချက်ချင်းထင်ရှားလျက်, စိန့်ပီတာစဘတ်ထဲမှာ moored ပေမယ့်ဂိမ်းသာကြားနေသို့မဟုတ် Finnish ရေထဲမှာကစတင်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, enterprising ဖင်လန်ဖင်လန်-ရုရှားနယ်စပ်၏ချက်ချင်းအနီးတစ်ဝိုက်ရှိ, အရှေ့ဖင်လန်၌အခြားသောကြီးမားတဲ့လောင်းကစားရုံဖွင့်ဖို့မျှော်လင့်ထား။ အဆိုပါဖွင့်ပွဲ 2015 ဘို့စီစဉ်ထားသည်။
ယနေ့ကြှနျုပျတို့ဥရောပတစ်ဝှမ်းခရီးသွားလာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစဉ်အလာကိုဆက်လက်။ ကျနော်တို့ပြီးသားပရာ့ဂ်, တဲလင်းမြို့က Minsk, ဝါဆော, ဗေလ်နီးယပ်စနှင့်ရီဂါသွားရောက်ခဲ့ကြသည်။ ဖင်လန် - ဤအချိန် CasinoToplists အများအပြားမြစ်များနှင့်ရေကန်များနှင့်အတူမြောက်ပိုင်းဥရောပအတွက်ပါတိုင်းပြည်ကိုသွားရောက်လည်ပတ်ရန်သင့်အားဖိတျချေါထား။ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ကိုယ်နှိုက်အဖြစ်လောင်းကစားဝိုင်းအဖြစ်စိတ်ဝင်စားဖို့အများကြီးသင်ယူကြသည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့က virtual ခရီးစဉ်စတင်!
ဖင်လန် - ပထဝီနဲ့သမိုင်းတစ်နည်းနည်း;
ယခုအချိန်တွင်တိုင်းပြည်အတွင်းမြေယာ-based ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ: ပြည်နယ်များ၏လက်ဝါးကြီးအုပ်;
အကျော်ကြားဆုံးကာစီနိုလောင်းကစားရုံ - «ရန်းကာစီနိုဟယ်လ်စင်ကီ»;
ခေတ်သစ်ဖင်လန်၏ပိုင်နက်အပေါ်ပထမဦးဆုံးအခြေချနေထိုင်ဘီစီအကြောင်းကို 8,500 နှစ်ပေါင်းသောရေခဲပြင်ခေတ်, စဉ်အတွင်းသည်ထင်ရှားပါပြီ။
ဆွီဒင်နှင့်ရုရှား: ဤပြည်နယ်၏သမိုင်း inextricably သည်၎င်း၏အိမ်နီးချင်းများနှင့်အတူချိတ်ဆက်ထားပါသည်။ အများအပြားကရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကဖင်လန်ဆွီဒင်, စက်တင်ဘာလ5ကအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်, 1809 ဆွီဒင်အလက်ဇန္ဒားဗြဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည်
ဖင်လန်ကတည်းကရုရှားသိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ သို့သော်မကွာအဘို့ - ပြီးသားဒီဇင်ဘာလ 4, လွတ်လပ်ရေး၏ 1917 ကြေငြာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဖင်လန်နိုင်ငံလောင်းကစားတားမြစ်သည်, ဒါပေမယ့်နိုင်ငံတော်ကလက်ဝါးကြီးအုပ်ကြသည်မဟုတ်။ ဤသည်လောင်းကစားဝိုင်းကနေအားလုံးဝင်ငွေအဖြစ်ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုရေးအစီအစဉ်များခြင်း, ချစ်ခြင်းမှတိုင်းပြည်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကြောင်းဆိုလိုသည်။
(စက်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှကစား) ဒါခေါ်အစည်းအရုံး Ray ရှိပါသည် - ကနိုင်ငံ၏တစ်ခုတည်းသောလောင်းကစားရုံနှင့်တကွလူအပေါင်းတို့ slot ကစက်တွေကပိုင်ဆိုင်ကြောင်း။
အဆုံး၌, လောင်းကစားကနေတစျခုလုံးကိုဝင်ငွေစုဆောင်းနေသည်နှင့်အထူးကော်မတီကနေဖြင့်ဖြန့်ဝေကုသိုလ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းများ ( "မသန်စွမ်းပြည်ထောင်စု", "မိဘမဲ့ပြည်ထောင်စု" နှင့်အခြားအသင်းအဖွဲ့များ) ၏အားလုံးမျိုး၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်များ၏ 70% နှုန်းမှာနေစဉ် 30% လောင်းကစားဝိုင်းနှင့်လစာအလုပ်သမားများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအပေါ်သုံးစွဲနေသည်။
ထို့အပြင်ကြောင့်နိုင်ငံသားများမှစောင့်ကြည့်လျက်ရှိသည်: သင်သာအသက် 18 နှစ်ပေါင်းရောက်ရှိပေါ်မှာလောင်းကစားရုံမှရနိုင်တယ်။ သင်သည်သင်၏ "ပြန်ကြားရေးကတ် Player ကို" compile ဖို့လိုအပ်ပါတယ် - ထိုအခါဟုတ်ကဲ့, သင်ကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်များနှင့်ဓာတ်ပုံကိုမေးမြန်းနေကြသည်ကိုပထမဦးဆုံးခရီးစဉ်ကိုကြောင်းကိုပြင်ဆင်ရမည်။
စားဆင်ယင်-code ကိုအတော်လေးဒီမိုကရေစီဖြစ်ပါသည် - သငျသညျ tracksuit နှင့် Sneaker မှလွဲ. အရာအားလုံးဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အဝတ်ကိုသင်ဗီရိုမှလွှဲပြောင်းပေးရန်ဟုမေးပါလိမ့်မည်။
အဓိကလောင်းကစားရုံတိုင်းပြည်ကိုခေါ် «ဂရန်းကာစီနိုဟယ်လ်စင်ကီ» ။ ဒါဟာ Mikonkatu 19 မှာ« Fennia » (« Fenniya ") palas- ဟောင်းအဆောက်အဦကိုမကြာမီကပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံဟိုတယ်အတွက်ဖင်လန်ရဲ့မြို့တော်အတွင်းတည်ရှိသည်။ အဆိုပါလောင်းကစားရုံ 12.00 ထံမှ 04.00 မှဖွင့်လှစ်သည်။
ဤတွင်, ပရိသတ်တွေအခွင့်အလမ်းလောင်းကစားရုံ၏ဂိမ်းများကိုအမေရိကန်ကစားတဲ့, Baccarat, အနက်ရောင်ဂျက်, အနီရောင်-ခွေး, အိုအေစစ် Poker ပူဇော်ကစား။
သငျသညျ 300 options များကြားတွင် slot ကစက်တွေ, ကြိုက်တတ်တဲ့ အကယ်. ဆက်ဆက်ကိုယ်တော်တိုင်ကသူတို့အကြိုက်ဖို့တစ်ခုခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့်လူကြိုက်များဒါဘီမြင်း, Touch ကိုကစားတဲ့နှင့် Lightning Poker Bet ။
ကဒ်ဂိမ်းပရိတ်သတ်တွေတက္ကဆက် Hold'em, Omaha-နှင့်ဖဲချပ်ဝေ၏အခြားပုံစံများကိုတစ်ဦးကုမ္ပဏီကိုရှာဖွေနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဒါဟာအပတ်စဉ်ပြိုင်ပွဲနှင့်လစဉ်ပြိုင်ပွဲတနင်္ဂနွေနှင့်နိုင်ငံတကာဖဲချပ်ဝေပြိုင်ပွဲ,2ကြိမ်နှစ်ကနှစ်ဦးစလုံးအိမ်ရှင်အဖြစ်။
အဆိုပါလောင်းကစားရုံသာငွေသားပေးချေနိုင်ပါသည်, သို့သော်စားသောက်ဆိုင်အတွက်, သင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်တစ်ဦးငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအဖြစ်အတော်လေးသင့်လျော်သည် - သတိပြုပါ။ လက်ရှိငွေကြေး - ယူရိုငွေ။
စိန့်ပီတာစဘတ်ကနေဒီနေရာကိုစီးနင်းဆော့ကစားရန်ဆန္ဒရှိသူမြားစှာ။ သို့တိုင်ကားတစ်စီးအားဖြင့်လမ်း 3-6 နာရီ (border ပေါ် မူတည်. ) ခန့်ကြာ။ စိန့်ပီတာစဘတ်ကနေတစ်ဦးကရထား "Allegro" ပင်ပိုမိုမြန်ဆန်ဤနေရာတွင်သင် whisk - ရုံ3အတွက်: 00 ။ ထို့အပြင်ဖင်လန်ဗီဇာခံယူဖို့လွယ်ကူပါလိမ့်မဟုတ်ပါဘူး။
ဆီးနိတ်လွှတ်တော်ရင်ပြင် (Senaatintori) နှင့်မြို့လယ်။ ဒါကြောင့်တိုင်းပြည်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအစအဦးနှင့်အတူချိတ်ဆက်ကြောင့်စတုရန်း၏ဗဟိုမှာတော့အလက်ဇန်းဒါး II ကိုမှတစ်ဦးအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦးဖြစ်ပါတယ်။ အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦးဘုရားရှိခိုးကျောင်း, အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်များနှင့်နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်နန်းတော်လည်းရှိပါတယ်။ အနီးအနားမှာယဉ်ကျေးမှုစက်ရုံဖြစ်ပါသည် Korjaamo, နဲ့အနုပညာပြပွဲနှင့်ပြတိုက်တည်ရှိသောပေါ်လာတာဟာအရင် - ကဒီမှာဓါတ်ပုံဖြစ်ကြသည်။
ဆောင်းရာသီဥယျာဉ်။ နေရပ်လိပ်စာ: Hammarskjöldintie, 1A ။ ဒါက 19th ရာစုအတွင်း created ဖန်လုံအိမ်အပင်များနှင့်ပန်းပွင့်အမျိုးမျိုးတို့ကိုဗိုလ်မှူးအထွေထွေ Jakob Lindfors ဖုံးလွှမ်းကြ၏။ ဒါဟာအားလုံးနေရဆဲမှအခမဲ့, ဝင်ပေါက်ကဒီမှာအခမဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်လိုချင်သူဖြစ်သည် - ဤအစဉ်အလာဤနေ့ဆက်လက်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ 200 စက်ရုံများထက် ပို. အကြောင်းအရာအလိုက်ခန်းမထဲမှာကဒီမှာကိုစုဝေးစေခြင်းနှင့်လူတိုင်းအားလုံးတစ်နှစ်ပတ်လုံးအလွန်အံ့သြစေ။ တနင်္လာနေ့ - ပယ်နေ့။ 15.00 တိုင်အောင်, တနင်္ဂနွေ - - အလုပ်ချိန် 16.00 မှတက်။
ဟယ်လ်စင်ကီမှာရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်ရုံ။ နေရပ်လိပ်စာ: ဟယ်လ်စင်ကီ တိရစ္ဆာန်ရုံပြီးတော့ Mustikkamaanpolku , 12 ။ ဒါဟာတူညီတဲ့နာမတျော၏ကျွန်းပေါ်တွင် "တိရစ္ဆာန်ရုံဟယ်လ်စင်ကီတိရစ္ဆာန်ရုံ" ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှ (200 ခန့်) တိရစ္ဆာန်များ၏များစွာသောနှင့် (1000 န်းကျင်) သည်အပင်များသာသက်ရောက်သည်။ လက်တွေ့ကျကျ, ဒီမှာက၎င်း၏လူနေမှုမြို့သားတို့နှင့်တကွ, ကမ္ဘာ၏မြေတပြင်လုံးမော်ဒယ်အားဖြင့်ကိုယ်စားပြုသည်။ နွေရာသီမှာတော့ဒီနေရာမှာကူးတို့ဖွငျ့ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။
ပင်လယ်ကမ္ဘာ " ပင်လယ် အသက် »။ နေရပ်လိပ်စာ: Tivolitie 10 ။ လက်ျာဘက်သငျသညျအထကျအဏ္ဏဝါဘဝအမျိုးမျိုးရွက်လွှင့်မည်သည့်တစ်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏ပုံစံ၌ဤငါးမွေးကန်။ ဒါဟာLinnanmäkiမှာအဏ္ဏဝါအသက်ပြတိုက်ဖြစ်ပါတယ် 250 စတုရန်းမီတာဧရိယာကိုဖုံးလွှမ်း။ မီတာနှင့် 50 ငါးပြတိုက်ပါဝင်သည်။
ဖင်လန်မှာလည်း "bogs ၏မြေ" ဆိုလိုတာက "Suomi" ဟုခေါ်။ အကြောင်းကို 189.000 ရေကန်များနှင့် 179.500 ကျွန်းများရှိပါတယ်;
တိုင်းပြည်အတွင်း5လူဦးရေသန်းထက်ပိုမို2သန်းအပူပေးခန်းဆောက်ဖင်လန်လူမျိုး၏အနှစ်သက်ဆုံးလှုပ်ရှားမှုများတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟာသတစ်ခုမျိုးကိုဖင်လန်တစ်ချွေးပေါင်းအိမ်မပါဘဲအသက်ရှင်နိုင် "ပင်ရှိပါသည်။ သို့သော်မရရှည်လျားသည်။ "
ယာဉ်အသွားအလာပြစ်မှုများများအတွက်ဒဏ်ငွေဝင်ငွေအဆင့်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူပေါ် မူတည်. တွက်ချက်နေကြသည်: အကြေငြာဝင်ငွေမြင့်မား, ပိုသူပေးဆပ်ရန်ရှိသည်တော်မူမည်
တောင်ပိုင်းဖင်လန်နိုင်ငံ 73 ရက်ပေါင်းနောက်ဆုံး "အဖြူရောင် Nights" - နေရောင်ဤအချိန်တွင်သတ်မှတ်ထားပါဘူး;
ဖင်လန်သူတို့ရဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်များ၏ဂုဏ်ယူဖြစ်ကြောင်းနှင့်သီးကိုအလွန် ချစ်. ပါ၏
Santa Claus ဖင်လန် Joulupukki ဖြင့်သမုတ်သော, သူသည်ဇနီးတစ် (ဟောင်း-ခရစ္စမတ်ကိုဆိုလိုသည်) ကို Joullumuori ရှိပါတယ်;
ဖင်လန်ဘာသာစကားတစ်ခုကိုတက်ကြွမှုကိစ္စနှင့်ပေါရာဏဟုယူဆထားတဲ့ 14 ပိုပြီးရောဂါဖြစ်ပွားမှု,2အတော်လေးရှုပ်ထွေးပါတယ်။
0.1 ထိပ်တန်း 10 ဖင်လန်အွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း